Mampanantena ny hampiakatra ny hafainganam-pandehany ankehitriny ny fenitra WiFi vaovao | Vaovao momba ny gadget
Tsy maintsy niandry ela isika hatramin'ny 2009, nanomboka niresaka momba ny fenitra WiFi vaovao izy ireo izay hanoratany ara-bakiteny, na farafaharatsiny nofaritan'izy ireo, ny fanavaozana ireo fifandraisana tsy misy tariby ao an-tranonay. Ity fenitra vaovao ity, fantatra amin'ny anarana hoe WiGig ary fantatra amin'ny anaran'ny IEEE 802.11ad Nankatoavina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 2013 ary nanomboka teo dia tsy maintsy niandry ny fankatoavana ny fankatoavana izahay ho an'ireo fitaovana voalohany tonga teo amin'ny tsena.
Taorian'ny nandrasana nandritra ny telo taona mahery hatramin'ny nankatoavana ny fenitra, farany Ny WiFi Alliance dia nanambara androany ny fanamarinana ofisialy ny fenitra WiGig, fifandraisana haingam-pandeha afaka hahatratra 8 Gbps amin'ny toe-javatra mety sy amin'ny fitaovana voalohany hahatratrarana ny tsena, na eo aza izany, ao anatin'ny fe-potoana antonony, araka ny doka, tokony hahatratra 80 sy 100 Gbps.
Na dia avo roa heny aza ny WiGig, dia misy fetra maromaro tsy maintsy raisintsika.
Na izany aza, io fenitra io ihany koa dia misy fetrany satria ny fepetra dia mitaky antsipiriany tena lehibe ary izany WiGig dia natao hampiharina amin'ny toerana izay tsy misy ny sakana toy ny rindrina na lovia vy lehibe. Tadidio fa, fitaovana tsy afaka mihoatra ny 10 metatra ny elanelany. Araka ny hitanao dia toa hevitra voafetra ihany izy io, na dia toa mety tsara aza ny fampiharana azy, ohatra, ao amin'ireo efitrano misy ny atiny 4K alaina sy laniana, ampitaina tsy misy tariby ny angona ho an'ny zava-misy virtoaly, birao fidirana ifampizarana, telefaona finday, birao .. .
Amin'ity fotoana ity dia tokony homarihina fa raha te hahatratra ireo hafainganana ireo dia hampiasa WiGig a tarika hafanana 60 GHz vaovao. Misongadina io tarika io, ankoatry ny zavatra hafa, mamela ny famoahana angon-drakitra avo lenta kokoa, na dia izany aza, manana fahefana kely lavitra noho ny tarika mahazatra indrindra izay mifanaraka aminy ihany koa izy, 2.4 GHz sy 5 GHz na mivantana ny 900 MHz ampiasain'ny HaLow.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Mampanantena ny hampitombo avo roa heny ny hafainganam-pandehany ny fenitra WiFi vaovao
Ireto misy fomba vitsivitsy hanimbana ny bateria finday avo lenta misy anao; Manao an'io ve ianao?